कुन क्यामेरा किन्दा ठिक होला भनेर गहिरो सोचाइमा हुनु हुन्छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > HOW TO > कुन क्यामेरा किन्दा ठिक होला भनेर गहिरो सोचाइमा हुनु हुन्छ ?
जापान घुम्ने मौका मिलाएर थुप्रै पर्यटकहरु यहाँ बाट ईलेक्ट्रोनिक समान किनेर लाने गर्दछन। यी ईलेक्ट्रोनिक सामानहरुमा क्यामेरापनि एक हो। जापानले विश्वको माझ निकै पपुलर क्यामेरा ब्राण्ड पस्किएको छ। केहि प्रमुख ब्राण्डहरुमा क्यानोन, नाईकोन, सोनी, फुजिफिल्म र ओलिम्पस, पानासोनिकहरु हुन्। यी ब्राण्डहरुले जापानमा थुप्रै मोडेलका क्यामेराहरु बजारमा लिएर आएका हुन्छन। ईलेक्ट्रोनिक सामान किन्ने प्रमुख गन्तब्य भनेको बिक क्यामेरा, यामादा देंकी वा योदोबाशी क्यामेरा जस्ता ठूला स्टोरहरु हुन्। क्यामेरा भनेको एक दुइ हजार यनको सामान नभएकोले किन्नु अघ्ही निकै सोच पुर्यानु पर्दछ। आज हामी हजुरहरुलाई हजुरको चॊइसमा समेटिने क्यामेराहरुको जानकारी गराउने छु। सर्बप्रथम त बाजारमा राखिएका क्यामेराको प्राकरको केहि जानकारी लिम है त।
क्यामेराको सेन्सरको प्रकार:
क्यामेराको सेन्सरको साईजले क्यामेराको विभाजान गरिएको हुन्छ। सेन्सर भनेको क्यामेराको चित्र (फोटो) छापिने ठाउँ हो। सामान्यतय हामी जस्तो कन्ज्युमरको लागि बजारमा तिन थरि साईजको सेन्सर भएको क्यामेरा हुदछ। ति हुन् फुल फ्रेम, ए पी एस सी र माईक्रो थर्ड। नाम अनुसार यिनीहरुको साईज पनि ठूलो बाट सानोहुने क्रममा राखिएको छ।
फुल फ्रेम – ३६ mm * २४ mm
ए पी एस सी – २८.७ mm * १९ mm
माईक्रो थर्ड – २३.६ mm * १५.८ mm
यी भन्दा ठूलो वा सानो साईजको सेन्सरपनि पाईन्छ। सेन्सर जति ठूलो भयो क्यामेराको मूल्य पनि त्यति नै महँगो हुन जादछ। फुल फ्रेम भन्दा ठूलो सेन्सर लाई मिडियम फ्रेम र त्यो भन्दा ठूलोलाई लार्ज फ्रेम सेन्सर भनिन्छ 。तर यी ठूला संसारका क्यामेराहरु प्रोफेसनलहरुले प्रयोग गर्ने हुनाले सामान्य प्रयोग कर्तालाई फुल फ्रेम सम्मको क्यामेरा भए पर्याप्त हुने गर्दछ। अझ भन्नु पर्दा थुप्रै प्रोफेसनलहरु पनि फुलफ्रेम क्यामेरा प्रयोग गर्दछन।
क्यामेराको फंगसनको आधारमा
क्यामेराले कसरि फोटो खिच्ने हो, त्यसको आधारमा यसलाई सामान्यतया दुइ प्राकरमा भिभाजन गरिन्छ। यो भिभाजन हजुरले क्यामेरामा हेर्ने भ्यु फ़ाईण्डरमा बन्ने चित्रको आधारमा गरिएको हुन्छ। यी दुइ प्राकर हुन् :
१. डि एस एल आर क्यामेरा – डि एस एल आर क्यामेरा भित्र साचिकैको मिरर हुने गर्दछ। हजुरले भ्यु फाईनडरमा देख्ने चित्र येही मिरर ले रिफ़्लेक्ट गरेर बनेको हुन्छ। यो मिररले गर्दा डि एस एल आर क्यामेराको साइज तुलनात्मक रुपमा ठूलो र भारि हुने हुन्छ।
२. मिरर लेस क्यामेरा – यो क्यामेरामा मिरर हुदैन. यसमा ईलेक्ट्रोनिक भ्युफ़ाईण्डर हुने गर्दछ। यो नया टेक्नोलोजी पनि हो। मिरर नहुने भएकोले यो क्यामेराको साइज अलि सानो हुने गर्दछ। पहिले पहिले यी ए पी एस सी र माईक्रो थर्ड सेन्सर साईजका मात्रा बन्ने गर्थे। सानो र हलुका हुने भएर सामान्य युजरको लागि मिरर लेस प्रथम रोजाई बन्न थाले। अहिले प्रोफेसनलको लागि फुलफ्रेमको मिरर्लेस पनि बन्ने गरेको छ।
कसले कस्तो किन्दा राम्रो हुन्छ
क्यामेरा भनेको किनी रहिने सामान होइन। त्यसैले किन्दा खेर आफुलाई वा आफ्नो कामलाई कस्तो खालको क्यामेरा चाइने हो अनि आफ्नो बजेट कति हो त्यो सब विचार गरेर किन्नु पर्दछ।
१. सामान्य युजर
यस्ता युजरमा मैले कहिले कहिँ मात्र फोटो लिने, परिवारहरु पिकनिक जादा क्यामेरा चाहिने, फेसबुक वा इन्स्टग्राममा फोटो हाल्ने जस्ता युजर समेटेको छु। यदि हजुर सिम्पल फोटो खिच्नु हुन्छ भने महँगो क्यामेरा किन्नु पर्ने जरुरि हुदैन। फोनको क्यामेरा भन्दा अलि राम्रो फोटो खिच्न चाहने हरुको लागि यो सेक्सन हो। कुन क्यामेरा लिदा ठिक हुन्छ त ?
डि एस एल आर – खासमा यो सेक्सनको मानिसले डि एस एल आर क्यामेरा नलिदा ठिक हुन्छ। डि एस एल आर ठूलो भारि र भद्दा हुने भएर हो। तर पनि हजुरलाई ब्याट्री बढी टिक्ने डि एस एल आर नै लिन मन छ भने, नाईकोन ३५००, क्यनोन ७० डी हरु हुन्
मिरर लेस क्यामेरा – यो क्यामेरा किन्नेहरुको लागि यो सेक्सनमा थुप्रै क्यामेरा छन्। केहि हुन् फुजीफिल्म एक्स टि १००, सोनी अल्फा ६०००, क्यानोन एम ५०, ओलिम्पस OMD E१० मार्क III
A post shared by James L Dillen (@jldillen) on Jun 5, 2019 at 10:41am PDT
२. सेमी-प्रो युजर
मैले यो वर्गमा फोटो खिच्न प्यासन भएका र फोटो खिच्दा विभिन्न सेटिङ्ग प्रयोग गर्न चाहनेहरुलाई राखेको छु। यस्ता मानिसले कुन क्यामेरा किन्दा ठिक हुन्छ त ?
डि एस एल आर – डि एस एल आर ठूलो हुने भएपनि अटो फोकस र ब्याट्रीको मामिलामा अझै मिरर्लेस भन्दा माथिनै छ। त्यसैले थुप्रै सेमी प्रो र प्रोफेसनलहरु अझै डि एस एल आर नै रुचाउछन। सेमी- प्रोहरुले किन्दा हुने डि एस एल आरमा क्यानोन ८० डि, नाईकोन डि ७५००, क्यानोन ७ डि मार्क ई जस्ता क्यामेराहरु पर्दछन।
A post shared by Canon Warriors (@canon_warriors) on Jun 5, 2019 at 5:03pm PDT
मिरर लेस क्यामेरा – सेमी-प्रो युजरहरुले फुजी फिल्मको एक्स टि २ वा एक्स टि ३, सोनी अल्फा ७ Ii वा अल्फा ७ III हरु पर्दछन।
A post shared by conceptstoreamplaz (@conceptstoreamplaz) on May 14, 2019 at 2:21am PDT
३. प्रोफेसनल युजर
मैले यो वर्गमा क्यामेराको म्यानुअल सेटिंग फोटो खिच्न लागेको वातावरण अनुसार मिलाउन सक्ने र फोटो खिचेर आम्दानि गर्न सक्ने हरुलाई राखेको छु। प्रोफेसनल युजरहरु धेरै जसो फुल फ्रेम वा त्यो भन्दा ठुलो सेन्सरको क्यामेरा प्रयोग गर्दछन। थुप्रै भेरिएसनका लेन्स पाईने हुनाले उनीहरु मिरर लेस भन्दा डि एस एल आर रुचाउछन। तर अहिले थुप्रै कम्पनिले थरि थरिका लेन्स बनाउने भएकोले मिरर लेसको लोकप्रियता पनि प्रोफेसनल युजरको माझ बढेको छ। यदि हजुर प्रो युजर्हो भने मैले रिकमेण्ड गरिरहनु पर्ने जरुरि देख्दिन। तर पनि यस्ता मानिसले कुन क्यामेरा किन्दा ठिक हुन्छ त ?
डि एस एल आर – नाईकन डि ८५०, क्यानोन ५ डि मार्क IV वा मार्क III , नाईकन डि ८१० , नाईकन डि ७५०, क्यानन ६ डी मार्क II आदि
A post shared by Karma Fotoğrafçılık (@karmafotografcilik) on May 31, 2019 at 5:07am PDT
मिरर लेस क्यामेरा– सोनी अल्फा मार्क III , नाईकन जेड ६ वा जेड ७ , सोनी अल्फा ७ आर III , क्यानोन ईओएस आरपी, फुजीफिल्म एक्स एच १ आदि
A post shared by karni singh (@camera_guruji) on Feb 19, 2019 at 10:15pm PST
यो अन्तिम सेक्सन चाही क्यामेरा बाट फोटो र भिडियो दुवै लिन मन पराउने मानिसको लागि हो। भिडियो लिने मानिसले ध्यान दिनु पर्ने कुरा भनेको क्यामेरामा इमेज स्ट्याब्लाइजेसन छ वा छैन भन्ने हो। यदि हजुरको क्यामेरामा यो प्रबिधि छ भने हातमै लिएर थोरै हल्लिदा पनि हजुरको भिडियो स्टेबल नै हुन्छ। अहिलेको क्यामेरा बजार हेर्ने हो भने यो प्रबिधि भएको क्यामेरा सोनी अल्फा मार्क III जुन फुल्फ्रेम भई अब्बल फोटो खिच्दछ। अर्को कुरा यो क्यामेराको मूल्य अन्य फुल फ्रेम भन्दा निकै कम पनि रहेको छ।